Wasiir Amniga” Kuwa Muqdisho colaada ka hurinaya waxey gabaad u noqon karaan Al-shabaab iyo Daacish” iyo Ciidamada Dowlada oo lagu wado in ay tilaabo cad ka qaadaan Mucaaradka. | Weheliye Online
Wasiir Amniga” Kuwa Muqdisho colaada ka hurinaya waxey gabaad u noqon karaan Al-shabaab iyo Daacish” iyo Ciidamada Dowlada oo lagu wado in ay tilaabo cad ka qaadaan Mucaaradka.
Previous articleCiidanka mucaaradka oo ka baxay madaxtooyada Cabdiqaasim. Sababta ay uga baxeen. Amisom oo ciidan..
Next articleDEG DEG:Ciidanka mucaaradka oo qarka u saaran madaxtooyada &DF oo ciidan cusub dalbaday+Xaalka Xamar